Filannoowwan Irraa Akkaataawwan Haaromsuu
Sajoo akkaakuu haalataa isa haaromsuuf barbaaddu cuqaasi.
Galmicha keessaa, bakka unka akkaataa haaromee itti jalteessuu barbaaddu cuqaasi. Fakkeenyaaf, keewwata isa dhangeessuu hujeekatti fayyadamte cuqaasi.
Xiyya isa sajoo Fillannoo Irraa Haalata Haraa aansun jiru cuqaasitii, bafata xiqqaa irraa, Akkaataa Haaromsi filadhu.
Title is: Filannoowwan Irraa Akkaataawwan Haaromsuu